M/weynaha Somaliland oo baaq nabadeed u diray beelaha ku diriraya gobolka Sool… – Hagaag.com
20 Luulyo 2019 in National // M/weyne Farmaajo oo Madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda Midowga Afrika iyo IGAD…
20 Luulyo 2019 in National // M/weyne Farmaajo ayaa kala hadlay M/weyne Deni muhiimada ay leedahay wadashaqeynta…
20 Luulyo 2019 in English // Saudi king approves hosting U.S. troops to enhance regional security: SPA…
20 Luulyo 2019 in Sports // Xulka Qaranka Algeria oo ku guuleystay koobka Qararmada Afrika oo lagu qabtay Masar…
20 Luulyo 2019 in National // M/weynihii hore ee Koonfur Afrika Thabu Mbeki iyo wefdi la socda ayaa soo gaaray Mogadishu…
M/weynaha Somaliland oo baaq nabadeed u diray beelaha ku diriraya gobolka Sool…
Posted on 23 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Dhumay.
“Dagaalka dhumay ee wakhtigani maaha mid la aqbali karo, mana aha macquul in la daadiyo dhiigga dadka muslinka ah, sidaa awgeed waxa aan ugu baaqayaa kuwa colaadda hurinaya inay ka waantoobaan oo ay u tudhaan dadkooda maatida ah ee aan waxba galabsan iyo aakhiradooda.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland
Madaxweynaha Somaliland wuxuu ugu baaqayaa waxgaradka, waayeelka, culimada iyo aqoonyahanka labada dhinac ee dirirtu dhexmarayso inay xasilooni ku soo dabbaalaan xaaladdaas, dhexdana u xidhaan sidii loo joojin lahaa khasaaraha uu sababay dagaalka beelahaas walaalaha ah.
Waxaanu madaxweynaha Somaliland si adag u tilmaamay in aan loo dulqaadan karin colaad sokeeye oo sidan u khasaare badani ay ku soo noq-noqoto deegaankaas koonfurta gobolka Sool.
Madaxweynuhu waxa uu ciidamada qaranka, maamulka gobolka iyo dhammaanba hay’adaha kala duwan ee Xukuumadda amrayaa inay tallaabo dowladnimo ka qaadaan colaadaasi soo noq-noqotay, cid kasta oo u hoggaansami-wayda nabadda iyo samahana tallaabo ku habboon ka qaadaan.
Sidoo kale Madaxweynuhu wuxuu shacabka Jamhuuriyadda Somaliland ee nabadda iyo samaha jecel u soo jeedinayaa inay gacan ka geysataan daminta colaadaasi iyo joojinta dhiig danbe oo ku daata colaadaa soo noq-noqotay.
About Admin (6959 Articles)
Saudi king approves hosting U.S. troops to enhance regional security: SPA…
UN envoy to Somalia: flags need for “good relations” between federal member states and…
Israel will not prohibit Reps. Omar and Tlaib from visiting next month…
Xulka Qaranka Algeria oo ku guuleystay koobka Qararmada Afrika oo lagu qabtay Masar…
Hooyaday iyo lix walaalahay ah ISIS ayaa dishay, kadib Trump ayaa weydiiyey meeday hooyadaa?
FBI-da oo la weydiistay in ay baaritaan ku sameyso barnaamijka FaceApp oo baraha bulshada…